Ngaphandle komthombo wamanzi ahlanzekile, zonke izintelezi zokuba nomuzi wekhaya lakho zinciphisa zibe zero. Awukwazi ukumanzisa utshani wakho futhi ungagcwalisi ichibi lezingane. Yebo lapho! Ngisho nokupheka kuzoba yileyinye inkinga.
Uma ungafuni ukuthenga uketshezi oluyigugu emabhodleleni, umthombo e-dacha uzokusiza . Kuyinto yangempela ukuyihlanza ngezandla zakho, futhi kuzothatha isikhathi esincane. Ngenketho eshibhile uzodinga kuphela isikulufa, esingenziwa kusuka kumbhobho wensimbi.
Indlela yokulungisa ipayipi
Kungokwemvelo, ngoba nje awukwazi ukubhoboza umgodi. Ukwenza lokhu, kuzodingeka ukwenze ngcono emklamo ohlotshaniswa nokusetshenziswa kwe-fishery evamile. Kodwa futhi emaphethelweni ayo okugcoba kuyadingeka ukugcoba imiphetho yokusika, ngoba kungenjalo ngeke kwenzeke ukuyibeka phansi.
Kungcono ukusebenzisa insimbi kusuka kumafayela ngenhloso. Ngaphezu kwalokho, udinga ukuthola ibhuloho ukuthutha umhlabathi oqoshiwe, amafosholo kanye nepom nge-hose ephelele.
Ngaphambi kokuba ugobe umthombo ku-dacha ngezandla zakho, ake siphinde sibuyele esihlokweni sokulungisa kahle ipayipi. Ukushiya kusuka emaphethelweni ayo aphansi kuya emitha ekuphakameni, ukubopha izimbobo ezimbalwa (ububanzi buka-6 mm) ngamamitha amabili. Lokhu kwenziwa ukuqinisekisa ukuthi ububanzi bayo bangaphakathi abugcini ngesikhathi sokusebenza.
Indawo oya kuyo ukuqhuba umsebenzi wokudoba, udinga ukuhlanza ngokucophelela kusuka ezidongeni nasezingeni. Ngemuva kwalokho, bamba ukucindezeleka okuncane (ama- bayonet amabili noma amathathu ama-bayonet) ukuze uthole umhlahlandlela ongcono we-drill, emva kwalokho ungaqala ukusebenza.
Ukuze ujabulele zonke izinzuzo umthombo ozinikeza i-dacha, kuzodingeka usebenze okuningi ngezandla zakho. Ukuze wenze lula ukufaka umhlabathi phansi, ngezikhathi ezilinganayo kumele kukhishwe futhi kuthunjiswe enhlabathini elandelwe. Ngezinye izikhathi indawo yomsebenzi iphuziswa ngamanzi, okusiza ekuhambeni kwezingxenye eziqinile zomhlaba.
Ngokushesha nje lapho isibambo sesithuluzi sakho sisondela emhlabathini, sidinga ukwanda. Emva kwalokho, ukusebenza naye kungase kungabi lula, ungama etafuleni noma into enjalo.
Kuze kube nini ukumba?
Umthombo wakho ku-dacha, ngezandla zabo ukwenza wonke umuntu ongaba nakho, uzobe usulungele uma ufinyelela ku-aquifer. Kulula ukuyiqonda lokhu, ngoba inhlabathi ekhishiwe iyoba yinkomo.
Emva kwalokho, ungathola ipayipi elungiselelwe ngaphambilini. Ukukuvimbela ukuthi ingagcini, uma uhlalela emthonjeni, udinga ukuyifaka izikhathi eziningana futhi uthola ithuluzi libuyele. Ngakho uzophula ama-plugs angase aphume emhlabathini, angawagcoba ipayipi yakho yamanzi.
Njengoba sesishilo kakade, ukubhoboza umthombo e-dacha kuhlinzekela ukuba khona kwepompo. Kumelwe wehlelwe emthonjeni bese uphonswa amanzi, ususe ukungcola emanzini. Njengoba inqubo yokugudluza isikhathi eside, sincoma ngokushesha ukunakekelwa kwe-hose yokudonsa isikhathi eside, lapho amanzi angcolile azoguqulwa khona kusayithi lokumba.
Sichaze inqubo yokugaya amabhuku. Kodwa uma udinga ukufaka kahle ubuciko e-dacha, kuzodingeka usebenzise amasevisi ochwepheshe, ngoba ngeke nje ubambe ithuluzi lesandla kuma-aquifers.
Kungenzeka yini ukuba Ginger ukhulelwe? Ginger kwabesifazane abakhulelwe: Izimo
Iziphambeko zabaphathi abenza ngcono uhlelo lokugqugquzela abasebenzi kubangasebenzi